Decalogue yemunyori akanaka | Zvazvino Zvinyorwa
Kunyangwe parizvino handisi kunyora zvakawanda, zviri pachena kubvisa izvo zvandinonyora pano uye mune vamwe vanyora, paakazviita aigara achitora nhevedzano yematanho kana nhanho ... Yakave yakaita senge chirevo changu kuramba ndichinzwa kuti izvo zvandakanyora zvaitwa neruzivo rwechokwadi, nenzira kwayo uye nekupa kubata kwangu kwakasarudzika uye kwakasarudzika kunogona kusiyanisa zvinyorwa zvangu kubva kune zvevamwe vanhu ...
Panguva iyoyo, ini ndakanyora chirevo icho chandiri kuda kugovana newe nhasi. Ukatsvaga chero injini yekutsvaga Indaneti Iwe uchawana mazhinji acho, saka zvine hungwaru uye imwe neimwe ine maonero avo pamusoro peizvo iyo chirevo chemunyori akanaka, saka ndinoda kuziva maonero ako mune izvi uye mune zvipi pfungwa dzausingafunge seni. Kubva pamhando dzakasiyana dzemafungiro, zvinobva kwaunodzidza zvakanyanya.
Yangu chaiyo Decalogue yemunyori akanaka
Zvekunyora, chero fomati yakanaka: Hazvina basa kana kurudziro ikauya kwauri mune yekudyira uye iwe unogona chete kunyora pabepa repepa, kana kuti unogara zvakanaka kumba uye unogona kusarudza pakati pekuzviita mune yako moleskine notibhuku kana palaptop yako wega. Iye munyori akanaka anogona kuchinjira kune chero chinhu.
Wese munyori akanaka anofanirwa kuverenga zvakawanda, uye kwete zvinyorwa zvekare chete kana kwete zvinyorwa zvemazuva ano chete, ... Unofanira kuverenga zvakawanda nezvose, zvinonyanya kufadza.
Munyori akanaka iwe unofanirwa kunyora kunyangwe iwe uchinzwa kunge usinga zviite kana kuva nekunzwa kuti izvo zvaunonyora hazvina kunaka. Kufanana nehumwe hunyanzvi, kunyora kunoitwa. Iwe unogona kunge wakazvarwa uine moyo unoda kuzviratidza kuburikidza nekunyora kupfuura mumwe munhu, asi hazvireve kuti iwe rega kuramba uchidzidzira zvakanyanya. Nyora, uyezve ndinonyora zvakare.
Munyori akanaka haigare pamusoro pemagwaro ako, tsvaga hudzamu, vadetembi kunyangwe achinyora prose, asi asingamanikidze mutauro. Izvo hazvidikanwe kushongedza zvakanyanyisa mukuwandisa, hazvidiwe kunyepedzera kuve uyo asiri iye, zvekunyora kutaura.
Tarisa kana "kuteedzera" ma greats ... Bécquer, Auster, Kundera, Bukowski, nezvimwe. Ini ndaigona kutanga kutaura mazita kwete kumira. Tarisa uone zvinyorwa zvake, manyorerwo aanoita, nzira yaanotaurira uye yaanotaura. Tsvaga kutaridzika saivo, kuitira kuti kana iwe uchiwana (kunyangwe kubva kure), iwe unogona kuwedzera yako yega yekubata iyo inoita kuti usiyane nevamwe vese.
Tenda pane zvaunoita. Iwe unonzwa pfungwa dzakadai sekuti "kunyora hakuna zvakunobatsira"; «Unotambisa nguva yako kana uchitenda uye ukarota kuti rimwe zuva bhuku richaburitswa»… Sezvazviri muhupenyu, pano iwe unonzwa zvakare mazwi anoodza moyo ayo anongoda kukuratidza kana kukuita pasi. Tenda uye uvimbe newe, nekuti hapana mumwe munhu achazviita zvirinani kupfuura iwe.
Ipa mavara ako hunhu hukuru, tenda mukuvapo kwavo uye uvaunze kuhupenyu. Mukunyora kwako iwe wakaita saiye Mwari wavanoti anogadzira hupenyu kubva pasina ... Zvakanaka, iva Mwari anosika, anochinja kana kuparadza chero chaunoda uye anotora rondedzero yako munzira yaunoda.
Kubva pamanzwiro uye zvepamoyo zvinyorwa zvikuru zvinogona kuberekwa, asi chenjera! Usa gare uchinyora pasi pehasha dzakawandisa kana pasi pemufaro wakawandisa, nekuti kana ukadaro, iwe unongonyora zvakanaka kana iwe wakatarisana neakanyanya manzwiro. Ziva kujaira kunyora zvakare kana iwe uchinzwa zvachose chinhu.
Nyora uye iwe. Usafunge a priori izvo mhuri yako kana shamwari dzichafunga nezvako kunyora. Zvinyorwa zvako ndezvenyu, hapana mumwe munhu.
Zvibatsire pachako nerwiyo rwakanaka piyano kana pendi inokurudzira iwe kugadzira. Art inogara ichigadzira hunyanzvi.
Uye ikozvino sezvo iwe uchiziva yangu chaiyo chirevo chekuti wese munyori akanaka anofanirwa kutevedzera kana kuti zvirinani anofanira kuverenga nekufungisisa, iwe unofungei nezvazvo? Iwe unowanzo bvumirana nezvandinotaura here kana iwe ungachinja chimwe chinhu 100%? Ndinoda kuziva mafungiro ako.
Iyi tsika, sekuratidzira kwandakatanga pakutanga kwechinyorwa ichi, yakanyorwa makore mashoma apfuura, asi kana ndaverengazve ndinoramba ndichifunga zvakafanana nezvepfungwa imwe neimwe. Kunyanya mundima 2: "Munyori wese akanaka anofanirwa kuverenga zvakawanda, uye kwete zvinyorwa zvekare chete kana kwete zvinyorwa zvemazuva ano, ..."
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » dzakawanda » Decalogue yemunyori akanaka
Kuteerera saAdamu akashama mumunda, ini ndichateerera mwarikadzi nekupindura chinyorwa chake. Ini ndaona iri yakapusa, yakakwana chose, kunyangwe munhu wese achange aine mafungiro ake, avo mamwe maitiro, kubvisa mamwe kana kuwedzera mamwe sekunyevera kwaakaita. Ndinongoda kutaura mundima 1 kuti zvakandibatsira zvikuru kunyora SMS senzira yekunyora pasi chimwe chinhu chinoitika kwandiri panguva yandisina chinhu chekunyora pasi, nenzira iyi handikanganwe sei ini kare kare. Muchikamu chechipiri, zvakandibatsira kunyangwe kuverenga zvinyorwa zvakanyorwa pamadziro mumigwagwa, hazvisi kungoverenga zvinyorwa chete, chero kupi kunogona kuve neruzivo runotibatsira (kunyangwe mune zvisina kunyorwa). Ndatenda nenyaya ino yakanaka.
Pindura kuna jghd0811Jose
Carlos A. Gomez Naranjo akadaro
Ndakaifarira kana pasina chekufarira uye zvakanaka kubata uye kunyora chimwe chinhu.
Pindura kuna Carlos A. Gómez Naranjo
Kuyeuka María Pascual, muenzanisi mukuru wenyaya dzevana.